ဘာတေးလစ်တနာ – ဩဇာညောင်းမှု ကို ပြန်လည်ရယူ၊ ပြိုင်ဘက်များ ကိုဟန့်တား – MoeMaKa Burmese News & Media
တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဗမာ ( မြန်မာ) နိုင်ငံ – အပိုင်း ၈
(သိန်းမြင့် ဘာသာပြန်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၇
မြန်မာ နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြားက ဖွံဖြိုး တိုးတက်လာတဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်မှု ဟာ တရုပ်ကို မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ကျားကန်ပေးမယ့် နည်းလမ်းသစ်များစတင်ရှာဖွေဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ တရုပ်ပြည်က ပညာရှင်ဆန်တဲ့ ဂျာနယ်များမှာ ဘေဂျင်း ရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာပေါ်လစီမှာ ဘာမှားနေသလဲ၊ ဒါကို ပြုပြင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါး မြောက်များစွာ ဖေါ်ပြလာကြပါတယ်။ အကြံပြုထားတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု တခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ မှာ တရုပ်အပေါ် လက်ရှိမြင်နေတဲ့မကောင်းမြင်ပုံရိပ် ကို အလုံးစုံ ပြုပြင်ဖို့အတွက်၊ လူထုဆက်ဆံရေး လှုံ့ဆော်မှု စစ်ဆင်ရေး တခု လုပ်သင့်ကြောင်းပါ။
ဘေဂျင်း ဟာ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း က အခြားအင်အားစုများ- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် အခြားဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့များ – ကို စတင်ပြီး သဲသဲမဲမဲ လက်ကမ်းဆက်သွယ်ပါတော့တယ်။ တရုပ်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ ရဲ့ ယခင်က ကန့်သတ်အဝိုင်းအဝန်းဖြစ်တဲ့စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ သူတို့နဲ့.ပေါင်းစားနေတဲ့ စီးပွားရေးသမားများ ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့၊ တရုပ်ကွန်မြူ နစ်ပါတီရဲ့ ပေါ်လစီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့အစိုးရ အစိုးရချင်း၊ ပါတီ ပါတီချင်း နဲ့ ပြည်သူ ပြည်သူချင်း ဆိုတဲ့ နည်းဗျူဟာ ကို အသုံး ချပါတော့တယ်။ ဒီလို ‘အပျော့ဆွဲနည်းလမ်း’များအပြင် ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်း အစားစား လည်း ဘေဂျင်းမှာရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာပိုက်နက်နယ်မြေ တနံတလျားလုံး ကို အကြွင်းမဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး တာရှည်ခံမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ရဲ့ အားထုတ်ကျိုးပမ်းမှုများကို ချောမွေ့အောင်၊ ဒါမှမဟုတ် အဆင်မပြေ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း ဘေဂျင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၁ခုကတည်းကစပြီး ဘေဂျင်း ဟာ ဒီလို အကြမ်းနည်းအနုနည်း ရောစပ်ထားတဲ့ ကစားကွက်များကို သတိထား ဖေါ်ဆောင်ပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ ကိုပါ ဩဇာညောင်း နိုင်တဲ့အနေအထားကိုပြန်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တရုပ် နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ သူ့ ရဲ့ အနေအထားကို အင်အားခိုင်မာစေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း သူ ၂၀၁၄မှာ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံ နိုင်ငံများက မိတ်ဖက် များဘက်ကို လှည့်ပါတယ်။ ပို၍ အရေးပါတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုက ၂၀၁၁ မတ်လမှာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဟာ နိုဝင်္ဘာ လလယ် မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ပါတယ်။ သူသွားတာ တရုပ်ပြည် မဟုတ်ပါဘူး။ တရုပ်ပြည် ရဲ့ မိရိုးဖလာ ရန်သူ ဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ် ကိုသွားပါတယ်။ မြန်မာ ရော ဗီယက်နမ် ပါ
သူတို့ရဲ့ မြောက်ဘက်က အင်အားကြီးတဲ့ ဘုံ အိမ်နီးချင်း ကို ကြောက်လန့်ကြရတဲ့နေရာမှာ အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့် မင်းအောင်လှိုင် ဟာ သူ့ရဲ့ ဗီယက်နမ် အိမ်ရှင်များ နဲ့ ဆွေးနွေးစရာ တပုံတပင် ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရင် ယုတ္တိရှိပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရဟာ ဒေသတွင်းအခြားနိုင်ငံများနဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ဖို့ ရှာကြံနေချိန်မှာ၊ ပြည်တွင်းက သိသာထင်ရှားတဲ့ စိမ်ခေါ်မှုများက အိမ်တွင်း စီးပွားရေး န်ုင်ငံရေးမှာ လေးနက်တဲ့ တိုးတက်မှုများမရအောင် ဆက်လက်ဟန့်တားနှောက်ယှက်နေပါတယ်။သမိုင်း က သက်သေပြခဲ့သလို တရုပ်ရဲ့လမ်းနှစ်ခွ ပေါ်လစီက မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ သူပုန် အုပ်စုများအပေါ် က မတူခြားနားတဲ့ တွန်းအားပေးမှု ဩဇာညောင်းမှုတွေ ကို ဆက်လက် ဖေါ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က၂၀၁၁အစောပိုင်းမှာ သမ္မတရာထူး ခန့်အပ်ခံရအပြီးမကြာခင်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တရုပ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို တရုပ်အစိုးရက အစဉ်တစိုက်ငြင်းဆိုခဲ့ပေ မယ့် မြန်မာ က အင်အားအကြီးဆုံး ပြည်နယ်လက်ကိုင်မရှိ သူပုန်အုပ်စုကို တရုပ်ကနားလည်မှုနဲ့ ထောက်ကူပေးနေတာကတော့ မတူညီတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အကြောင်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၁၉၈၉မေ မှာ ဗကပ ကိုဆက်ခံတဲ့ ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တရုပ်အစိုးရရဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အကျိုးစီးပွားနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ UWSA ကို အင်အား ခိုင်မာစေဖို့ နည်းလမ်းရှာကြံ ပြီး ထိုမှတဆင့် မြန်မာ အစိုးရအပေါ် ဩဇာညောင်းမှုတိုးချဲ့ရေးဟာ တရုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဝပြည်တပ်မတော် ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တရုပ်ရဲ့ ရှည်ကြာတဲ့ ရင်းနှီးမှုဟာ ပြန်ကြည့်ရင်ဗကပ ခေတ်ကတည်းက စခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် UWSA ဟာ တရုပ်ထံက လက်နက်အမြောက်အများ ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၃ဧပြီ ၂၆ ထုတ် လူသိများထင်ရှားတဲ့ ” ဂျိန်း ကာကွယ်ရေး အပတ်စဉ်” စာစောင်အရဆိုရင် ဒီလက်နက် အရောင်းအဝယ်မှာ လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ် များ ပါပါတယ်။ ဒိလို ရဟတ်ယာဉ် များကိုရရှိသွားခြင်းဟာ UWSA ရဲ့ စစ်တပ်ကိုအရေးပါတဲ့အဆင့်မြင့်တင် ခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံးခြေလှမ်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝ စစ်တပ်ဟာ အာရှတိုက်မှာ အင်အားအကြီးဆုံး စစ်လက်နက် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံမဲ့ စစ်တပ် အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ နိုင်ငံမဲ့တပ်များထဲမှာ အကောင်းဆုံး လိုတောင်ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ ဂျာနယ်ကဆိုပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းခြောက်လ မှာ ဝ စစ်တပ် ဟာ သံချပ်ကာကား များကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရပါတယ်။ ဒီ ယာဉ်များထဲမှာ တရုပ်လုပ် PTL -02 6X6 ခြောက်ဘီး တင့်ကားဖျက်ယာဉ် များနဲ့ တရုပ်လုပ် 4X4ZFB-05 တိုက်ပွဲဝင် သံချပ်ကာကားများ ပါပါတယ်။ ( ဂျိန်း ဂျာနယ် က သတ်မှတ်ပြတာပါ)ထိုမျှမက UWSA ဟာ တရုပ်ထံမှာ အရေအတွက်များပြားလှတဲ့ လက်နက်ငယ်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်ရာ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမယ့် လူတယောက်သယ်ယူနိုင်တဲ့ HN -5ဆီးရီး လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစံနစ်များလည်းရရှိထားတယ်ဆိုပါတယ်။ ရုရှား ရဲ့ Strela-2( SA-7″Grail ) လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစံနစ်ကို တရုပ်က တုထုတ်ထားတာပါ။.
ဒီလိုနည်းနဲ့ဒီကနေ့ ဝ စစ်တပ်ဟာ ယခင် ဗကပ နဲ့ မတူ ပိုပြီးခေတ်မီကောင်းမွန်တဲ့ လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ် ဖြစ်နေပါပြီ။ လက်နက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ အမြဲတမ်းစစ်သည် ၂၀,၀၀၀ အပြင် ရွာတွေမှာ ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေ၊ အခြား အထောက်အကူပြု တပ်ဖွဲ့တွေရှိပါသေးတယ်။UWSA ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေအနားမှာတရုပ်ထောက်လှန်းရေး အရာရှိများ လိုက်ပါလေ့ရှိပြီး အကြံဉာဏ်များ လမ်းညွှန်မှုများ ပေးတယ်ဆိုပါတယ်။ ဒိလိုဆိုရင် တရုပ် ဟာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပါသလဲ ? တိုင်းပြည်မရှိ စစ်တပ် တစ်ခုကို လက်နက်တပ်ဆင်၊ ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေတာနဲ့ တချိန်တည်း( အရှေ့မြောက် ဗကပများကို ကူညီတဲ့ပေါ်လစီကို စွန့်လွတ်ပြိးချိန်ကစလို့ ) ဘေဂျင်း ဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ရင်းနှီးချစ်ကြည်တဲ့ ဆက်ဆံမှု ကို ဘာလို့လုပ်နေပါသလဲ?
← ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● ဝရမ်းပြေး အောင်ဝင်းခိုင်ကို ကူညီခဲ့သူ ရဲထွဋ်လှိုင် တရားလိုပြသက်သေဖြစ်လာ
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း ● ပြောင်းကိုင်ကြည့်ပါလား … →